I-Milking Parlor ngo-18436 (18436)
Ngaphezulu kwamakhulu amabini eminyaka ubudala, esi sakhiwo sangaphambili sefama sikwindawo efanelekileyo yeholide yokuhlola iindawo ezinomtsalane elunxwemeni. . Umgagangatho osezantsi:
Indawo yokuhlala isicwangciso esivulekileyo: Ngomgangatho wamatye.
Indawo yokuhlala: Ngesitshisi sombane sombane, iFreeview TV, iDVD player kunye neCD player.
Indawo yeKhitshi: Ne-oveni yombane, isitovu segesi, imicrowave, ifriji/ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Igumbi lokulala: Nebhedi enkulu kunye nemiqadi.
Igumbi lokuhlambela: Ngeshawari phezu kwebhafu, kunye nendlu yangasese .. Ukufudumeza okuphakathi kwerhasi, igesi, umbane, ilinen yebhedi, iitawuli kunye neWi-Fi ebandakanyiweyo. Igumbi lemidlalo elinetafile yephuli (ekwabelwana ngayo). . Indawo yokuhlala enendlu yasehlotyeni, iveranda kunye nefenitshala yegadi. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2. Akutshaywa. Nceda uqaphele: Kukho ichibi elibiyelweyo emabaleni, kumgama oziimitha ezingama-50. Ngaphezu kweminyaka engama-200 ubudala, ezi zakhiwo zazifudula zifama zixinene kwimbali, kwaye zazikhe zaba likhaya lamabanjwa emfazwe aseJamani ngexesha leMfazwe Yehlabathi ll, iCopper House iyikhaya labo. indawo yokuhlala engundoqo. Iguqulwe ngothando kwaye yakhiwe kufutshane nekhaya lomnini, enendawo enengca kunye neendawo zokuhamba zendalo apho iindwendwe zinokujonga izikhova kunye neebheji kwaye zonwabele intabalala yezilwanyana zasendle kunye nemibono yasemaphandleni, ngelixa abantwana benendawo eninzi yokudlala. Le ndawo ifanelekileyo yeholide inento yalo lonke usapho, kwaye inendawo ebiyelweyo enamahashe. Indawo efanelekileyo yeholide yokuhlola i-East Yorkshire Coast ngeemayile zolwandle oluphumelele ibhaso, zonke ngaphakathi kweemayile ezi-5. Indawo engcwele ye-RSPB eBempton Cliffs, ikumgama oziikhilomitha ezi-1.5, apho unokujonga khona imbonakalo ephezulu ukuya kwiFlamborough Head ngelixa ubona iintlobo ezininzi zeentaka ezinqabileyo ezihlala ngokukhuselekileyo. Kuthe saa kuNxweme lwase-East Yorkire zininzi iilali ezithandekayo ezineevenkile kunye neendawo zokulala ngobuninzi. Ukuqhuba iimayile ezingama-20 kukuzisa kwiPaki yeSizwe yeMoors yaseNorth York, kunye nelali yaseGoathland, eyaziwa ngcono njenge-Aidensfield (ilali yeHeartbeat kakhulu). Izindlu ezinembali ezikufutshane ziquka iSledmere House kunye neBurton Agnes Hall. IBridlington eneelwandle ezinesanti, indawo eyonwabisayo kunye nedama lokuqubha langaphakathi yimizuzu eli-10 yokuqhuba. I-Scarborough enemidlalo yeqonga, iiresityu, iivenkile kunye nonxweme olunesanti luhambo lwemizuzu engama-20. Ukuhamba ngeponi kunye negalufa ekuhlaleni. Ulwandle 2 imayile. Ivenkile, i-pub kunye nevenkile yokutyela iiyadi ezingama-500.
IMilking Parlour (ref 18439) ingabhukishwa kunye neCopper House (ref 18435), Shyre Stables (ref 18437), Rockville Cottage (ref 24376) kunye neRockville Lodge (ref UK2503) ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezili-18.